Makore gumi nematatu kubvira kuberekwa kwemunyori wechiFrench François Mauriac | Zvazvino Zvinyorwa
Makore 131 kubva pakazvarwa munyori weFrance François Mauriac
Mufananidzo naFrançois Mauriac.
Pazuva rakafanana nanhasi asi muna 1885, munyori anoshamisa wechiFrance François Mauriac akaberekerwa muBordeaux. Pazuva rino umo makore gumi nematatu nemakumi mapfumbamwe echirangaridzo ichi chinopembererwa, ndinofunga zvakakodzera kurangarira munzvimbo yangu yekuzvininipisa mukohwi weNobel Prize ya131 muLiterature.
Hupenyu hwaMauriac hunoratidzwa, pasina kupokana, yehondo dzehondo dzaimuperekedza muhupenyu hwake hwese. Zvichida kubatikana kwako mukutsigira zvaunofunga ndiyo nzira yakanakisa yekutsanangura hunhu hwako.
Nenzira iyi "akapinda" muHondo Yenyika I semutyairi weamburenzi, ainyora achinyora achitsigira hurumende yeRepublican panguva yeHondo Yenyika yeSpain uye aive mumwe wevadziviriri veFrance vachirwisa kupinda kweGerman panguva yechipiri Hondo.
Zvinofanira kutaurwa kuti haana kumbobvira apinda muhondo ipi neipi mukati meHondo Huru kubvira paakadzingwa nekuda kwekurwara. Iyo yepashure-yekurwira nguva yaive yake yakawanda nguva ine zvibereko maererano nekunyora zvinyorwa. kunyora: Kutsvoda kune wemaperembudzi (1922), Genitrix (1923), uye Gwenga rerudo (1925)
Kana iri mhirizhonga yeSpain. Munyori wechiFrench Aive chikamu chesangano reFrance Katurike iro rakasarudzira kurwisa fascism. Hunyanzvi hwakasangana nesangano reSpain panguva iyi hwakasanganawo mune dzimwe nyika, Muriac ari mumwe wevadziviriri veRepublic paivhu reGallic.
Kurwira uku kwese kwakaratidzwa muzvinyorwa zvakasiyana mumapepanhau figaro iye y dudziro kupi akashingairira kutora chikamu pamwe nezvinyorwa zvake zvakaomarara zvinotungamirwa nehutongi izvo zvakabuda uye zvakasimbiswa muEurope mukati ma30s.
Katurike nekutenda kwake kwakasimba imhedzisiro yehudiki hwake mumhuri inochengetedza zvine hushingi hwekunamata. Iyi pesvedzero yechitendero yakaratidzira basa rake noupenyu.
Zvisinei nekutenda kwake kwakasimba, Mauriac akanzwa hwaro hwayo kuzununguka mukati dambudziko rakadzama rerudo raakasangana naro mukupera kwema20. Dambudziko rinokonzerwa nekutorwa kwevaFrench nemunyori weSwitzerland Bernard Barbey. Nekudaro, hunhu hwake hwechiKaturike hwakabuda kubva panguva ino yakaoma uye ineshungu.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru chinotarisana nehukama hwaMuriac naGeneral De Gaulle. Muriac, mudziviriri anoshingairira wemufananidzo wa de Gaulle, haana kuzeza chero nguva kudzivirira uye kuwedzera chimiro chake kuburikidza nezvinyorwa zvake mupepanhau. Akaenderera mberi achiti de Gaulle anomuda.
Mushure mekusunungurwa kweFrance kutora kwake chikamu kwezvematongerwo enyika kwakawedzera zvakanyanya nekuda kwake chinzvimbo chechikonzero cheAlgeria panguva yeFrance mhirizhonga munharaunda yeNorth Africa. Kunyangwe achigamuchira kutyisidzirwa nekuda kwechikonzero ichi, haana kuzeza kuita kuti chiratidzo chake chechokwadi chikunde.
Murume wetsamba uyo aishingairira akakunda nguva dzose kuda kwake kuchinja, zvichibva papfungwa dzake, nyika yaairarama. Hunhu hwakabatana nenguva yake, kune nhoroondo yezana ramakore rechiXNUMX.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Makore 131 kubva pakazvarwa munyori weFrance François Mauriac
Zvinyorwa zvinyorwa zvinokurudzira
Mabhuku anofashamira iyo Plaza de España muSeville